Inona no taona mety indrindra hampianarana ankizy mitaingina bisikileta? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Ahoana ny fomba hampianarana ankizy mitaingina bisikileta - vahaolana mifantoka amin'ny hetsika
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy mitaingina bisikileta - vahaolana mifantoka amin'ny hetsika
Inona no taona mety indrindra hampianarana ankizy mitaingina bisikileta?
Ny salanisaTAONAHO AN'NYankizynymianatranymitaingina bisikiletaeo anelanelan'ny 3 sy 7 taona - fa salanisa fotsiny io. SASANYankizymety ho vonona hanomboka ny fananganana ny fahaiza-manao bisikileta aloha kokoa. Ny sasany mety te hiandry mandra-pahatongan'izay rehefa misy kodiarana roa tsy dia lehibe sy mampatahotra.10 Sep 2020
>> Fitsarana: Hey ry zalahy, teo anilan'ny namako Brian aho ary niresaka momba ny bisikileta izahay ary nilaza izy fa 'mbola tsy nitaingina bisikileta mihitsy aho' ary fantatrareo fa nitovy tamin'ny 'wow' aho, okay. Ity dia karazana mangatsiatsiaka, hampianarinay anao ny fomba sy ny fahafantaranao fa nanomboka nanamboatra azy izahay. Saingy nieritreritra aho fa milay ny manao lahatsoratra raha sanatria ianao na olon-kafa manandrana mianatra mitaingina bisikileta mora foana, saingy misy singa fototra sasany hahalalana izany.
Ka ity i Brian, ry sakaiza. >> Brian: Hey >> Fitsarana: Ah, ny zavatra momba ilay bisikiletany ankehitriny dia tena tsara tokoa, bisikileta ambany ity. Noho izany, jereo ilay antsoina hoe fantsona ambony, ambany be izy io.
Etsy ankilany, antsoina hoe fantsona midina io. Ity ny fork satria toa sahala amin'ny fork sy ny kodia ary ny zavatra rehetra. Ity ny cassette any aoriana misy girara ary misy ny rojo vy eo aloha.
Eny ary, noho izany misy ny singa fototra amin'ny bisikileta. Ny ampahany tena lehibe dia ny freins. Ka ireo no levers frein, eto, ary misintona ny kalipera izay mampifandray ny pads amin'ny sisiny.
Ny bisikileta sasany dia manana freins disc ary zavatra hafa, saingy ho zava-dehibe izany. Rehefa mianatra mitaingina bisikileta ianao dia mila bisikileta mihazakazaka mifanaraka aminao mba hahafahanao mijoro tsara amboniny. Jereo hoe ny tongony fisaka amin'ny tany.
Mahafinaritra ity toerana ity, tsy manandrana izy fantatrao fa ny mijoro amin'ny kofehin-dambany dia milatsaka avy eo amin'ny bisikileta.
Ary mazava ho azy fa tsy maintsy hampiasa ireo freins ireo izy rehefa manomboka mianatra. Na izany na tsy izany, ny fomba ampianaranao ny ankizy handeha bisikileta amin'izao fotoana izao dia ny fananana ireo kickbikes kely ireo. Tsy manana pedal akory ireo! Ny ataonao dia mipetraka eo amin'ny seza satria mahitsy izy ary atositosika amin'ny tongotrao.
Ary izany dia manome fotoana fohy ny bisikileta, ary tena ilaina izany satria manome anao mandanjalanja. Ary avy eo mahatsiaro ho milamina 'mandrosoa ary daka kely i Brian ary avy eo atsangano ny tongotrao' Andao hojerentsika ny fomba ahafahany manangana ny tongony tahaka izany? Ny tiako holazaina dia hoe tsy mandeha an-tongotra na inona na inona izy fa mahatsapa fandanjalanjana. Ary jereo, raha nanandrana nitodika an'i Brian ianao dia nianjera ianao dia afaka nametraka mora foana ny tongotrao.
Tsy mila milatsaka mihitsy izy! Mazava ho azy fa manana ny fiarovan-dohany izy. Fa maninona ianao no tsy mihodina? Ie, jereo ny fomba ametrahany mora foana ny tongony havanana. Mianatra mandanjalanja àry izy ary izany no dingana voalohany rehefa miezaka mianatra môtô ianao.
Uh, tohizo ary tazomy i Brian eto, andao handeha. Tsy mitaingina haingam-pandeha izy ka tena mila mampiasa freins, azony atao fotsiny ny mampidina ny tongony, ary raha mihafaingana izy dia hanomboka mamboatra satria ity no karazana bisikileta azonao ahemorana. Ka eto, maninona ianao no tsy maka ny hitanao ve fa miverina toy izany? Um, eny, afindrao fotsiny ny tongotrao fa izaho, eny jereo ity.
Ny sasany amin'ny bisikiletan'ny ankizy sy ny entany rehefa mihemotra ianao dia ny frein-nao, fa ity kosa somary mpandehandeha. Fantatrao àry fa tsy maintsy manomboka mitaona anao izy handray ny tànany ary hanatratra ilay levera frein. Amin'ity bisikileta ity dia mampihetsika ny frein ao aoriana ny lever havanana.
Ary io no freins tsara indrindra ary afaka miala ianao. Um, koa, raha manomboka mihetsika ianao dia mety hianjera rehefa mihetsiketsika ny ao aoriana dia azonao atao ny manintona azy ao aorianao. Ary hanana fotoana mora kokoa amin'ny fandanjana fotoana ianao.
yoga ho an'ny bisikileta
Ka ny zavatra manaraka nataon'i Brian dia izay hataony dia ny fanazaran-tena amin'ny pedal, fa amin'ny tongotra iray ihany. Ary apetrany amin'ny pedal ilay tongotra iray hafa. Hitanao ve izany? Io tongotra io dia hiala amin'ny tany foana.
Ary midika izany fa lasa ny antsasaky ny fifandanjany; ny tongony hafa sisa no azony ianteherana. Hanampy azy handeha haingana kokoa izany ary hampitombo koa ny filanjana amin'ny vatany fa tsy ny tongony, okay? Ary tsara, tsara izany, hitanao, ny tananao dia eo amin'ny frein, zava-dehibe izany satria efa saika nifandona tamin'ny fiara teo isika taloha, mianatra momba ny mitaingina bisikileta ary manadino fa 'oh, mila mamaky aho', ka maninona ianao no brian fa mankanesa amiko fotsiny. Mitovy amin'ny scooter daka izany, ny tongotra iray no miakatra ary ny iray kosa mandaka.
Azafady, ary fantatrao fa manao izany amin'ny làlana tsy dia be loatra isika ka azo antoka. Manana ny fiarovan-dohany izy. Ka zahao ity! Amin'ny bisikileta amin'izao dia mandeha izy.
Tsy manao pedal na zavatra hafa izy mihodina.
Mandrosoa hanapaka ho ahy any ka mbola nampiasainy kely ny tongony fa ny freins no nampiasainy. Ka izy no mamolavola ny toe-tsaina ilainao mandeha bisikileta. Ary toy ny, ara-bakiteny 'mandra-pahoviana no nanomboka nianatra, Brian?' >> Brian: 20 minitra >> Fitsarana: '20 minitra 'Ka vetivety foana izahay no nivoaka teto ary nanapa-kevitra ny hampiasa fakantsary aho.
Fa tena mahatalanjona izany, toy ny ao anatin'ny 20 minitra dia afaka mandeha an-tsambo ianao amin'ny ankapobeny. Averiko indray, heveriko fa tena zava-dehibe ny manomboka amin'ny fananana habe bisikileta mety. Ary avy eo mampivelatra ireo toe-tsaina ireo. Satria 'nianjera ianao?' >> Brian: Tsia >> Fitsarana: Tsia, tsy nianjera mihitsy izy.
Tsy misy rangotra, tsy misy tahotra namboarina, ahoana ny fandanjana. Fantatrao fa mianatra izy! Mahazo aina tsara ve ianao raha te-hametraka, mametraka ny tongotra ilany amin'ny pedal ary manandrana mamindra? Ie! Andao handeha ity no voalohany, ity no Brian voalohany ara-bakiteny! Ampiasao ny freins, tsy maintsy mihodina isika.
Jereo fa manana ny sain'ny tongotra izy. Jereo ity! Eny ary, avereno. Ie, tsara be! Vita tsara
Hah a! Andao handeha, okay, jereo. 'Mbola manangana ireo fahazarana ireo izahay. Saingy, fantatrareo fa dimy minitra eo ho eo izahay.
Ity ny fivelomanao dimy minitra momba ny fomba bisikileta. Ny fahazoana tsara ny bisikileta indray, fampiharana ny fandanjana nefa tsy mandeha an-tongotra, mihatsara kely amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tongotra iray ambony ary amin'ny fampiasana ilay iray hafa toy ny scooter ary avy eo mampihatra frein. Ary avy eo dia mitaingina bisikileta ianao amin'ny ankapobeny.
Ka manaova fialam-boly, alao antoka, mitafia ny fiarovan-doha sy izany rehetra izany ary eny, eny! ut any. Ity dia fomba tena tsara hivezivezena. Sady ara-pahasalamana no miorina amin'ny fiaraha-monina ary tena mahafinaritra fotsiny.
Ahoana no ampianaranao ny ankizy mitaingina bisikileta nefa tsy misy kodiarana fanofanana?
Soso-kevitra 8ho an'ny fampianarananyAnkizy mitainginanyBisikileta tsy misy fanofanana...
Hamarino tsara faZAZAte-hanao izany.
Safidio ny tsarabisikileta.
Tadiavo ny toerana mety.
Ampianarony fomba tapaka aloha.
Esory ny pedal.
9 Mey 2016
Salama, Theron aho avy ao amin'ny Ivotoerana Fivarotana Camacho. Androany isika dia handeha hamaky ny dingana amin'ny programa antsoiko hoe Learn-2-Ride ary hampianatra ny tanora ny fomba bisikileta. Ity i Lela mpandray anjara taminay, telo taona izy ary Ava rahavaviny, valo taona izy.
Rehefa miasa miaraka amin'ny ankizy kely ianao dia te hampiasa teny tsotra izay takatr'izy ireo. Aleo foana mampiseho zavatra fa tsy miresaka momba azy fotsiny dia alao antoka fa mampianatra ny ankizy mitaingina bisikileta koa ianao, mila fiarovan-doha foana izy ireo. Ny fiarovana no zava-dehibe indrindra.
Hamarino tsara fa manana fiarovan-doha mety tsara ianao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana rantsan-tànana roa eo ambanin'ny tadiny eo ambanin'ny saokany sy ny rantsan-tànanao roa eo ambonin'ny volomaso - ny fiarovan-doha dia tsy lavitra loatra na lavitra loatra aoriana. Hamarino tsara fa manao aroloha ianao izay manome ohatra tsara.
Ny bisikileta mipetraka tsara dia hiantoka fa mora be ny mianatra. Asaivo mipetrapetraka amin'ny tongotra ny tongotr'izy ireo amin'ny lasely amin'ny tany. Tokony hiondrika kely ny lohalinao.
Ny bisikileta mandanjalanja dia bisikileta tsy misy pedal na kodiarana hanampy anao mitaingina Raha tsy manana bisikileta mandanjalanja ianao dia afaka mampiasa bisikileta mahazatra fotsiny ary manaisotra ny pedal. Raha tsy eo an-dàlana ny pedal, dia afaka manafaka ny tongony eo akaikin'ny bisikileta ilay mpandray anjara. Ny toerana - eo amin'ny kianja filalaovana basikety isika eto, tsy misy sakana na sakana, misy ny tsy fisosana, tonga lafatra amin'ny fianarana mitaingina soavaly, andao hiditra amin'ny fahaizantsika voalohany - ilay scooter mipetraka.
Rehefa mipetraka eo amin'ny scooter ianao dia mipetraka eo ambonin'ny lasely ny mpandray anjara amin'ny tongotra roa amin'ny tany. Alao antoka fa somary miondrika ny lohaliny, avy eo toraso ilay mpandray anjara hampiasa tongotra 1 isaky ny hanosika ny tenany handroso. Raha vantany vao zatra mitaingina môtô scooter izy ireo ary zatra ny lanjan'ny bisikileta, ny zavatra manaraka azontsika atao dia ny manomboka manangana ny hery miaraka amin'ny Frog Hop.
Ny Frog Hop dia hanomboka amin'ny tongotra roa miaraka amin'ny fotoana iray handehanana. Ampio izy ireo zatra mandray ny tongony, izay hanampy amin'ny fitadiavana ny pedal avy eo. Raha vantany vao mahafehy ny hopon'ny sahona izy ireo dia mila manangana hery bebe kokoa isika.
Mba hanaovana izany, dia mampiasa ny fomba fanosehana-2-morontsiraka 1 2 3 isika na manosika sy mihetsika. Izany dia manangana fiakarana bebe kokoa ary zatra mihodina amin'ny bisikileta nefa tsy mampiasa ny tongony. Ankehitriny satria nahazo tombam-bidy bebe kokoa ilay mpitaingina anao vaovao dia mila mampianatra azy ireo ny fomba hijanonana isika ary manao izany fotsiny isika amin'ny filazàna azy ireo mba hitazona ny tongotr'izy ireo amin'ny tany.
Raha misy paosin-bisikileta ny bisikiletanao dia azonay ampiasaina ny freins. Raha vantany vao mihodina milahatra tsara ny mpamilinao, izao no fotoana hampianarana azy ireo hitodika. Ampiasao aloha ny fomba mahia sy mitarika, miondrika amin'ny tany ny tongotra roa, miankina amin'ny bisikileta iray ny bisikileta iray rehefa mamily na mihodina ny kofehin-tànana mankany amin'ny làlan'ny mahia.
Ankehitriny rehefa afaka mihazakazaka sy mihodina ny mpandray anjara aminao, dia afaka manomboka mihazakazaka mitondra fiara amin'ny faribolana isika, manaraka ary mitazona azy ireo handeha hatrany amin'ny alàlan'ny fomba fanaon'ny sahona na fanosehana ary morontsiraka. Ankehitriny ny mpitaingina anao vaovao dia mahay manosika sy mihodina amin'ny tsipika mahitsy, manintona ary mamily ny bisikileta, tonga ny fotoana hampidirana ireo pedal ary handroso tokoa ny bisikileta, andao hivoaka ilay bisikileta tena izy na averintsika amin'ny bisikileta bisikileta izay nampiasain'izy ireo. Ity misy hetsika mahafinaritra iray hampianarana ny fahatsiarovana ny hozatra amin'ny tongotra mba hanodinana ny pedal amin'ny hetsika boribory.
Nantsoina hoe daka bisikileta Mipetraha eo an-damosinao ary atsangano ny tongotsika. Andao alao sary an-tsaina izao ny tongotsika dia eo amin'ny tongotry ny pedal ary mandroso isika, azonao atao aza ny manangana ny tananao toy ny mihazona ny kofehin-tànanao. Ny fahaizan'i Ava dia hita fa tena tsara, napetrakay tamin'ny bisikileta ny bisikileta Heveriko fa vonona ianao Ahoana ny fahatsapanao fa vonona aho Tena tsara Izao fotoana izao hametrahana ny fahaiza-manao rehetra nianaranay nampidirina sy natambatra.
Handeha an-tsambo araka izay tratra izahay ary hanatsara ny tanjontsika, hampitraka ny tongotray ary hahita azy ireo pedal - afaka mandeha ianao! OK 1 2 3 manosika sy morontsiraka, mahita ny pedal, ny boribory, izay toa tsara - mitondra fiara! Tena mahaliana ho an'ny vao manomboka ny mianatra mitaingina bisikileta samirery. Nampidirinay fotsiny ny fahaiza-manao takiana amin'ny fandanjalanjana sy ny fiarovana ary ankehitriny dia eo am-pelatanan'ny pedal izy ireo sisa no mampihatra. Fanazaran-tena be dia be.
Miezaha mba hahafinaritra ny mpandray anjara. Rehefa kivy na reraka izy dia miala sasatra ary alohan'ny hahafantaranao azy dia mitaingina fahatokisana izy ireo. Misaotra nijery! Mitandrema, mifalia, fa ho hitanay eny amin'ny làlana izy ireo.
Afaka mandeha bisikileta ve ny zaza 2 taona?
Ankizy kely mankasitraka ny fahatsoran'ny abisikiletaHO AN'NY2 taonafamolavolana. Raha vao mianatra ny mandanjalanja sy misoroka ny zanakao diaafakafamindrana mankany abisikileta am-bisikiletatsy mila kodiarana fanofanana, toy ny fahaizanyafakamamindra mora foana. Ny ankamaroan'ireobisikiletaaza asiana freins, toa ny zanakaoafakaampiasao ny tongony hijanona.7 feb 2019
Salama. Candida Jagger no anarako miaraka amin'ny The Fun Times Guide. Tena olona manana traikefa tena izy ary hevitra tena manampy izahay.
Vao tsy ela akory aho no nanapa-kevitra ny handeha bisikileta miaraka amin'ny zanako lahy 2 taona hivoaka ny trano sy hankafy ny lalan-kely any amin'ny faritra misy anay. Ao amin'ny tanànantsika kely any Maryville sy Alcoa, ny làlambe misy antsika dia manana lalana an-tongotra 15 kilaometatra mbola miandry antsika hivezivezy. Saingy misy tanàna lavitra maro hafa ary misy tanàna miala amin'ny làlambe.
Nividy ity bisikileta efa niasa ity aho teo amin'ny tsenan'ny Facebook. Scott Metrix tsotra izao tamin'ny taona 2012. Izy io dia manana fefy firaka aliminioma miaraka amina pedal mora, drivetrain Shimano haingam-pandeha 8 hafainganam-pandeha, ary kodiarana 700c hahafahako mandresy ireo fironana nefa tsy mitsambikina sy manosika.
Tena tiako ny loko sy ny vidin'ny $ 100 efa niasa. Nampiako ny seza zaza aoriana ao Thule Yepp Maxi ho an'ny zanako lahy. Io no safidy voalohany ho an'ny seza any aoriana ho an'ny fianakaviana izay mandeha bisikileta matetika.
Izy io koa no nanao ny lisitra 10 ambony ho an'ny seza ankizy any aoriana. Tiako ity, manome zotram-pialana aina sy azo antoka ny zanako lahy. Ny Yepp Maxi dia fingotra vita amin'ny endriny, hentitra nefa malefaka ary mandray ny fihoaran'ny lalana.
Izy io koa dia manana harness 5 teboka azo antoka hitazonana ny zanako lahy soa aman-tsara eo amin'ny sezany. Misy sisiny miaro amin'ny tongony raha sendra fianjerana. Ny fahatapahan-tongotra an-tongotra azo ovaina dia manome toky ahy sy ny zanako lahy - ny fahafantarana fa azo antoka ny entako sarobidy indrindra.
Ny lasely dia afaka mifatotra mora foana sy azo antoka amin'ny paositry ny sezako bisikileta. Ary avy eo tsy hoe hanao fiara be mandritra ny alina aho, fa misy taratra eo an-damosiny.
Milanja 8 kilao fotsiny ny seza ary somary maivana ary natao hitazomana ny zanako lahy mandra-pahatongany any amin'ny 49 pounds. Hasehoko anao fa mora ny mametraka zaza 2 taona. Ny zanako lahy dia 2 1/2.
Eny ary, ny zavatra voalohany ataontsika dia alao antoka fa vonona handeha amin'ny fiarovan-doha isika. Ary ho ataoko antoka foana fa eo am-pelatanako ny bisikileta. Hataoko azo antoka fa vonona ny fehin-kiboko.
Tsy maninona. Azoko antoka fa ny bisikileta miondrika mankany amiko foana sy eo amin'ny sisiny - fa tsy halefako mihitsy ny bisikileta. Ary ataoko azo antoka fa efa namboarina ny tadiny - mba hahafahan'izy ireo misintona mora foana.
Ary ataoko azo antoka fa voahidy. Ary rafitra fanaovana clip tsy mahazaka zaza koa, izay tena tsara. Ka tsy mila miahiahy momba azy aho milalao an'io.
Alao antoka fotsiny fa mifanaraka tsara izy ireo. Afatory izy ireo. Ary misy fehin-tongotra izay heveriko fa tsara, raha sendra mianjera isika dia tsy mila miahiahy momba ny rantsam-batany manidina ivelan'ny faritra.
Araka ny nolazaiko dia mitazona hatrany ny kodiarana eny an-tanako aho mba tsy hihena tampoka. Ny zavatra iray tiako tadiavina dia ny hahazoana antoka fa miakatra sy tsy mandeha amin'ny lalan-kely ilay pedal - ka rehefa vonona ny hanitsaka azy aho dia mora be. Ary avy eo dia omaniko handeha ny pedaliko ary manipy tongotra fotsiny aho ary miomana ny pedalako ary mahazo hery haingana.
Ary avy eo dia miala eo fotsiny isika. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia tadidio azafady mba tsindrio ny bokotra 'Tiako'. Aleo ihany, raha tsindrio 'Misoratra anarana' dia hampandrenesina ianao rehefa mandefa ny lahatsoratra manaraka.
Azafady, alao antoka fa tsindrio ilay rohy lahatsoratra etsy ambany amin'ity lahatsoratra ity raha mila torohevitra sy fampahalalana mahasoa kokoa hanampy anao hiomana tsara kokoa. Tiako ny mizara ny tokotaniko any East Tennessee. Ary hahita anao amin'ny traikefa nahafinaritra manaraka!
Efa 4 taona ve ny zaza tsy ampy bisikileta?
nybisikileta mandanjalanjadia fomba tsara hampianarana ny ankizy4hatramin'ny 6taonamianatra mitaingina abisikileta. Na mbola tsy mianatra mianatra mitaingina ny zanakao abisikiletana mitolona amin'ny fahatokisana hanaisotra ny kodiarana fiofanana,bisikileta mandanjalanjaafaka manampy. Tadidio fa ny seza dia tokony hapetraka 1 ″ -1.5 ″ eo ambanin'ny inseam-jaza.23 Mar 2021
Ny fisafidianana ny bisikileta mety dia dingana tsotra, saingy misy teboka tena ilaina hotadidina. Na izany aza, izahay no ho voalohany hanaiky fa tsy manam-pahaizana amin'ity sehatra ity izahay ka dia namolavola bisikileta Toila ampandehananà vondron'olona manam-pahaizana tena hanome torolàlana ho anay, ity ny bisikiletako, ny teboka voalohany dia ny tsy mifidy bisikileta. mifototra amin'ny taona, misy ankizy fitaovana sy ankizy kely. Na dia mety misy tondro fototra aza, ny taona fotsiny dia tsy ampy hiantohana ny zanakao milamina sy mahazo aina amin'ny bisikileta vaovao, ny fomba fisafidianana azy ireo tsara, refesina aloha ny hahavony, raha azonao atao ny mijanona elaela eo akaikiny rindrina.
Asio boky eo an-dohany ary asio marika ny teboka eo amin'ny rindrina izay ahavitany ny gorodona ary izany no hahavony Avy eo refeso ny halavan'ny diany izao ity no ampahany lehibe indrindra apetraho eo anelanelan'ny tongotrao ny zanakao ary apetaho amin'ny rindrina. Fandrefesana indray ny teboka eo amin'ny rindrina izay ahitan'ny boky ny halavan'ny insi-arm-nao raiso ireto fandrefesana roa ireto Tokony azonao atao izao ny mahazo hevitra tsara kokoa momba ny habeny. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra bisikileta natokana ho an'ny ankizy dia mitanisa ny haavony sy ny halavany an-tongotra ho torolàlana amin'ny tranonkalany.
Ka raha mankany amin'ny fivarotana bisikilety eo an-toerana ianao na hiala dia nanafatra an-tserasera. Ahoana no ahalalanao fa io no habe mety? Ny zavatra voalohany jerena dia rehefa mipetraka ao amin'ny mpizara toy izao ianao, miaraka amin'ny tongotra iray amin'ny tany ary ny tongotra iray eo amin'ny pedal eo am-pototry ny foibe dia somary miondrika ny lohalikao, toy izany ihany, mitovy ihany in. Ny zava-misy fa handeha amin'ny bisikileta ho an'ny olon-dehibe ianao na dia mipetraka eo amin'ny soda miaraka amin'ny tongotra roa amin'ny tany aza izy ireo dia manome antoka fa ny baolin'ny tongotra roa dia hahatratra ny tany hahazoana fitoniana, fa alao antoka fa tsy ambany loatra ny sela, satria sarotra aminao manokana ny mandeha pedal ary mety ho sarotra kokoa ihany koa ny mampifandanja - satria tsy afaka mihetsika amin'ny lafiny iray ny lohalinao, hafa kely ny bisikileta mandanjalanja, ka tokony ahitsy ny lasely mba hahazoan'ny zanakao miakatra ny lovafoot amin'ny gorodona ary mbola miondrika kely amin'ny lohalika Oh, raha mampiasa ny endriny sy ny haben'ny kodiarana dia ity no ampahany mety indrindra amin'ny fitambaran'ny bisikileta roa amin'ny bisikileta, mba tena hahazo aina sy miala voly, Mbola mila mitandrina ny sasany amin'ireo faritra hafa amin'ilay tranokala th Ny maso dia namboarina manokana ho an'ny olona kely kokoa, koa ac Tandremo manokana ny freins mba hahafahan'ny tananao hanatratra azy ireo mora foana, ary azonao atao koa ny mijery ny savaivon'ny takelaka kely kokoa izay mahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa amin'ny feny sy amin'ny frein koa , alao antoka fa mora misintona koa ny levers Tandremo ny cranks sy ny pedal, satria tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny sisa amin'ireo cranks ireo, indrindra fa ny zana-kazo dia azo ahitsy amin'ny haavony marina, saingy rehefa ny pedal dia miakatra hatreo amin'ny lohalika ary ny valahany dia tsy mila mivelatra loatra mba ahazoana aina kokoa ary midika koa izany fa ny bisikileta iray manontolo mihitsy b.
Somary lalindalina kokoa ary mbola be ny toerana rehefa zorony. Ny oram-panala eto dia mety ho zavatra tsy noeritreretiko, fa ny ankizy kely kokoa dia tokony hipetraka mitsangana eo ambonin'ireo bisikiletany kokoa noho ireo ankizy lehibe, satria ny taova anatiny dia lehibe kokoa, misy fotoana betsaka hahazoana aero any aoriana, fifandraisana eo anelanelan'ny Ny taonanao dia dimy eo ho eo ary vetivety dia marina izany, tsy dia mampahazo aina ahy fotsiny ny miondrika azy, ary mazava ho azy fa mora kokoa ny mianatra mitaingina bisikileta rehefa malahelo na mahitsy ianao, tsy tokony aero I ' Ho ao anatin'ny iray minitra aho Billy okay zazalahy tsara Poppieson any okay tsara andao hanao fahadisoana iraisana rehefa mividy bisikileta ho an'ny zanakao ianao dia ny misafidy habe lehibe loatra ka manam-potoana kely hitomboan'izy ireo ao ary rariny izany zavatra izany momba izay nahatonga ahy meloka tamin'ny tenako taloha fa tokony hiezaka ny hisoroka an'io fakam-panahy io isika satria ny bisikileta lehibe kokoa dia sarotra kokoa ho azy ireo ary tsy dia mankafy izy ireo mikiakiaka mety hanimba ny fahatokisany azy ireo na ho marin-toetra isika, izany dia betsaka koa le ss azo antoka satria ny kodiarana lehibe kokoa dia mety hahatonga ny bisikileta ho mora tantanana kokoa, milamina kokoa, ary avy eo mahavita mifehy vodilanitra hitantanana zavatra iray. Ka ahoana raha manana safidy eo anelanelan'ny kodiarana 16 sy kodiarana 20 ianao? Ny bisikileta mandanjalanja sy ny zanakao dia mahazo aina ary mifidy ireo bisikileta lehibe kokoa.
Niverina kely izahay booboo boo boo boo boo boo farany, ny fisafidianana ny bisikileta mety ho an'ny zanakao dia ny hahazoana antoka fa mahazo aina izy ireo. Aza adino ny manapa-kevitra amin'ny vanim-potoanan'ny taonany fa ny ankizy kely dia tsy maintsy mahitsy kokoa ary ny faritra rehetra amin'ny bisikileta dia tsy maintsy refesina. Izao no fotoana raha te-hahita lanjany bebe kokoa amin'ny paosinay kapoka ianao avy eo amin'ny sakana taloha, raha te hahita lahatsoratra bebe kokoa momba ny bisikileta ianao fa amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny olon-dehibe, raha toa ka mamely manokana ianao dia misy zavatra hafa momba ny fomba fanitsiana ny ny haavon'ny lasely sy ny fitsipika marobe dia mijanona eo ihany na eo ambany fotsiny ho an'ny lahatsoratra iray momba ny halavan'ny crank izay nolazainay fa manan-danja ihany koa ho an'ny bisikileta ankizy ary avy eo alao antoka fa mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny GCN ianao
Amin'ny taona firy no ahafahan'ny ankizy mitaingina bisikileta nefa tsy misy kodiarana fanofanana?
Amin'ny ankapobeny, ankizytokonymanana fivoarana fahaiza-manao maotera sahaza hianaranamitaingina bisikileta tsy misy kodiarana fanofananaeo anelanelan'ny 5-6 taonaTAONA.25 Jul 2020
Amin'ny firy taona ny zaza no tokony tsy hampiasa kodiarana fanofanana?
Matetika,TAONA4 hatramin'ny 9, fa ny ankamaroanyankizyafaka manatanteraka azy io amin'ny voalohanytapitrany karazany, nomena torolàlana sy fampaherezana sahaza.10 Jun 2013
Mandany vola ve ny bisikileta mandanjalanja?
Raha maro no mahita fa azo raisina afandaniam-bolanoho ny fampiasana azy io amin'ny fotoana fohy, dia fisainana tsy fahitana lavitra izany. Ny marina dia, nybisikileta mandanjalanjadia mandaitra tokoa amin'ny fampianarana ny ankizy ny fomba tsara mitaingina abisikiletafa mitombo haingana avy amin'izany izy ireo.
Moa ve efa antitra loatra ny zanako lahy amin'ny bisikileta mandanjalanja?
nybisikileta mandanjalanjadia fomba fampianarana lehibeankizyizay 4 ka hatramin'ny 6 taonaantitramianatra mitaingina abisikileta. Na mbola tsy mianatra mianatra mitaingina ny zanakao abisikiletana mitolona amin'ny fahatokisana hanaisotra ny kodiarana fiofanana,bisikileta mandanjalanjaafaka manampy. Ity lisitra ity dia natao ho an'nybisikileta antitrampitaingina 4+ taona.23 Mar 2021
ny fomba hitazomana ny fahasalamana
Afaka mitaingina bisikileta ve ny 5 taona nefa tsy misy kodiarana fanofanana?
Amin'ny ankapobeny, ankizytokonymanana fivoarana fahaiza-manao maotera sahaza hianaranamitaingina bisikileta tsy misy kodiarana fanofananaeo5-6 taona. Ianaoafakamandany fahavaratra iray hifehezana ny fifandanjanabisikiletaary miasa mankany abisikiletaamin'ny pedal amin'ny fahavaratra manaraka.25 Jul 2020
Afaka mitaingina bisikileta ve ny 4 taona nefa tsy misy kodiarana fanofanana?
Voalohany indrindra, amin'ny firy taona ny zaza no tokony hahafehymitainginakodiarana roabisikileta(izany hoetsy misy kodiarana fanofanana)? Matetika, taona4hatramin'ny 9, fa ny ankamaroan'ny ankizyafakatanteraho amin'ny faran'ny fiandohan'ny spectrum, omena torolalana sy fampaherezana sahaza.10 Jun 2013
Fa maninona no ratsy ny kodiarana fiofanana?
Ny antony hafa diakodiarana fanofananaTsy tsara dia ny mahatonga azy ireo hanao fanamby amin'ny sehatra tsy mitovy dia tena manahirana. Raha triatra na misosa ny sisin-dàlana, nykodiarana fanofananamiala mandanjalanja na mifantoka afovoany - ary ny kiddo dia mihodina mihodinakodiaranana misintona.7 Jun 2017
Maharitra hafiriana ny fampianarana ny ankizy mitaingina bisikileta?
Azonao atao ny mampianatra ny ankizy ny fototra ao anatin'ny 45 minitra. Mazava ho azy fa mila fanazaran-tena be dia be ny zanakao mba hahafehy tena amin'ny mitaingina bisikileta, saingy tsy mila fotoana be akory izany hanomezana azy ireo ny fitaovana fototra. Manokana fotoana amin'ny hariva na amin'ny faran'ny herinandro mba hahafahanao mandeha amin'ny mekanika tsotra sy ny fifehezana bisikileta miaraka amin'ny zanakao.
Karazana bisikileta inona no tokony hodian'ny ankizy?
Bisikileta misy kodiarana nisondrotra araka ny tokony ho izy izay mamela ny zaza hametraka tsara ny tongotra roa amin'ny tany mandritra ny iray santimetatra eo ambonin'ny hazo fijalian'ny bisikileta. Tsy mamporisika ny kodiarana fanazaran-tena (stabilizers any UK) izahay satria mampianatra fahazaran-dratsy mamily.
Afaka mianatra mitaingina bisikileta ve ny zaza be fanahiana?
Raha mitebiteby ny zanakao (heck, raha manahy ianao), mety hiteraka fihenjanana ny fianarana mandeha bisikileta. Ny fotoana voalohany nanandramako sy ny vadiko nampianatra ny zanakay vavy hanao bisikileta dia natomboka tamin'ny fikolokoloana izany ary nifarana tamin'ny fidradradradrana (ny zanakay vavy sy ny anay).